Afgaanistan - BBC News Somali
Wasaaradda warfaafinta Afqaanistaan oo la weeraray
Qarax iyo rasaas xooggan ayaa laga maqlay dhismaha wasaaradda warfaafinta dalka Afqaanistaan oo ku yaalla magaalada Kabul.
Madaxweyne ku xigeenka Afghanistan oo iskuday dil ka badbaaday
Madaxweyne ku xigeenka Afghanistan Abdul Rashid Dostum ayaa ka badbaaday weerar ka dhacay Waqooyiga dalkaas oo lagu dilay mid kamid ah ilaaladiisa
Afghanistaan: Weerarada Daalibaan oo welwel laga muujiyay
Dadka ka faallooda arrimaha ammaanka ee dalka Afghanistan oo ka digaya weeraradii ugu dambeeyay ee maalmahan kooxda Daalibaan ay ka fulinayaan dalkaasi.
Ku dhawaad 4,000 oo ruux ayaa magaaladan ku dhimatay sannadkii lasoo dhaafay
Waxaa soo baxaya xog cusub oo sheegeysa in hoggaamiyihii hore ee ururka Taalibaan Mullah Cumar oo muddo sanado ah ku noolaa guri u dhow saldhig militariga Mareykanka ku lahaa dalka Afqaanistaan.
Diblumaasiyiinta Mareykanka ee horkacaya wadahadalada ururka Taalibaan ee Afghanistan ayaa sheegay in “horumar muhiim ah” laga sameeyay wadaxaajoodkii ay kula yeesheen ururkaasi xaafiiskooda siyaasadda ee waddanka Qatar.
"Sariirtan ayaa badbaadisay noolasheyda"
Weerarka uu ka badbaaday ninkan ayaa waxaa ku dhintay 40 qof
Kooxda Taliban oo ku gacansayrtay wadahadalo ay la galaan dowladda Afqainstan
Kooxda Taliban ee dalka Afqanistan ayaa sheegtay in aysan wadahadalo toos ah la yeelan doonin dowladda Afqanistan marka wareega labaad ee wadahadalada nabada ay ka dhacayaan dalka Sacuudiga.
Mid ka mid ah hogaamiyayaasha sarsare ee Taliban oo duqeyn lagu dilay
Mid ka mid ah abaanduulayaasha sarsare ee kooxda Taliban ayaa lagu dilay duqayn ay Mareykanka ka fuliyeen dalka Afqanistan.
Dad rayid ah oo ku dhintay duqayn ay Mareykanka ka fuliyeen Afqanistan
Duqyn ay Mareykanka ka fuliyeen dalka Afqanistan Talaadadii ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 23 qof oo rayid ah, sida ay Qaramada Midoobay sheegtay.
Kabul: Qarax lala beegsaday goob uu ka dhacayay xuska mowliidka
Qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday goob ay ku shirayeen culumaa'udiin dalka Afqaanistaan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 43 qof.
Hawgalka uu hoggaamiyo isbahaysiga NATO eek u sugan dalka Afghanistan ayaa sheegaya in hal askari o Maraykan ah lagu dilay mid kalena lagu dhaawacay weerar uu soo qaaday qof katirsan ciidmada dalkaas.
Maulana Sami Al Xaq: Wadaad caan ka ahaa Pakistan oo la dilay
Warbaahinta maxalliga oo soo xigatay qoyska wadaadka ayaa sheegay in toori lagu dilay halka warar kalena ay sheegayaan in la toogtay.
Sucuudiga wuxuu markii ugu horreysay qirtay dilka weriye Jamaal Kaashogji
20 Oktoobar 2018
Sarkaal sare oo Mareykan ah oo ka badbaaday dil
Sarkaal sare oo katirsan ciidammada Mareykanka ee jooga dalka Afghanistan ayaa si dirqi ah uga badbaaday shirqool la doonayay in lagu qaarajiyo.
18 Oktoobar 2018
Sida loo ilaalin karo wariyeyaasha ku sugan jiidda dagaalka ee Afqanistaan oo ah meesha ugu dhimashada badan
Sannadkan dalka Afqaanistaan waxaa lagu dilay suxufiyiin ka badan kuwa lagu dilay dhamaan dalalka kale ee caalamka.
Nin dhalin yaro ah oo u taagnaa xilka xubin kamid ah baarlamaanka dalka Afghanistan ayaa kamid ahaa dad gaaraya sideed ruux oo lagu dilay weerar ismiidaamin ahaa oo ka dhacay gobolka koonfurta dalkaas kuyaal ee Helmand, sida ay saraakiisha dalkaasi sheegeen.